MuEskişehir, vadzidzi vakaverenga mabhuku patangi uye vakapa zvipo kuvagari - RayHaber
[14 / 10 / 2019] 365 Bus Line muKocaeli Inoteverwa Kubva Pano	41 Kocaeli
[14 / 10 / 2019] IETT irikuvandudza zvigaro zvaro kuti isimudze ruzivo	34 Istanbul
[14 / 10 / 2019] Ankara Sivas YHT Line Kusvika Mugumo! ..	06 Ankara
[14 / 10 / 2019] Hyperloop Dzidziso Kuzovhurwa Kusvikira 2040	1 America
mushaTURKEYCentral Anatolia Region26 EskisehirMuEskişehir, vadzidzi vakaverenga mabhuku patangi uye vakapa zvipo kuvagari
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, Central Anatolia Region, Railway, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, TURKEY, chitima 0
Eskisehir vadzidzi vakaverenga bhuku iri patram vakapa vagari vacho chipo
Mukati mechikamu chebasa rezvemagariro rakarongwa zvakabatana pamwe neEskişehir Metropolitan Municipality uye Özel ğağdaş Zvikoro, vadzidzi ve42 vakaverenga mabhuku patiramu neshoko rinoti 'Kuverenga chiito chazvino'. Vadzidzi vanoda kuziva chirongwa chakadai kuitira kuti vape vanhu tsika yekuverenga mabhuku mukufambisa kwevanhu, vakaendesa mabhuku avanoverenga kune vanenge vafamba mutiraki nezvinyorwa zvavakaisa mavari.
The Metropolitan Municipality, iyo ichangosaina akasiyana mabasa emagariro pamwe neFurya Association pamatanho, yaita imwe purojekiti neInternational Contemporary Zvikoro. N Kuverenga chiitiko chemazuva ano ”nekamuri 42 yekuverenga mabhuku evadzidzi, zvinyorwa zvakanyorwa mumabhuku avakaverengera vagari vemota. Vadzidzi, avo vakataura kuti kuverenga mabhuku kunovhenekera kwakadzika kwevanhu, vakati ivo vakada kupa vanhu tsika yekuverenga mabhuku mukufambisa kweveruzhinji neprojekiti iyi.
İsmail Samur, Dhairekita we akazvimirira wega Chikoro cheScience uye Anatolian High School, akataura kuti anodada nevadzidzi vake nekuona kweizvozvo chirongwa. Nekudaro, mwero wekuverenga mabhuku munyika yedu wakadzika kwazvo. Vanhu vanogona kushandisa zvakanaka nguva iyoyo nebhuku ravachaenda navo, kunyanya kana vachifamba kubva kune imwe nzvimbo vachienda kune imwe mune zvekufambisa neveruzhinji. Isu takadawo kuita chirongwa chakadai chemagariro nekutsigirwa kwevadzidzi vedu uye pfungwa dzinouya kubva kuvadzidzi vedu. Vadzidzi vedu vakaverenga mabhuku patiramu vakabva vapa mabhuku kune vamwe vagari vanofamba. Vaverenga bhuku racho, vakavakumbira kuti varipe kune mumwe munhu sechipo. ”
Vadzidzi Verengai Mabhuku muIZBAN 30 / 04 / 2018 MuAliağa, vadzidzi vanoverenga mabhuku muIZBAN nemutauro wekuti "Vanhu vanoverenga kwose kwose için kuti vatarise tsika yekuverenga uye kuda mabhuku. Nharaunda yeAliağa National Education Directorate yakaronga ikuti Munhu Anodzidza Kwose "basa kuitira kupa vadzidzi tsika yekuverenga uye kuisa rudo rwebhuku. Vadzidzi vekusekondari vakatanga kusimbisa nekuverenga mabhuku paIİBB Station uye pachitima. Chiitiko chacho chakapindwa nevadzidzi ve400. Mangwanani acho, vadzidzi nevadzidzisi vakaenda kuIndaneti kusvikira chitima chakatanga, uye mushure mokunge chitima chasvika, vaiverenga mabhuku panguva yerwendo ndokuenda rwendo rweMemenen. Vadzidzi vari kuverenga mabhuku, kwete kupedza nguva nefoni kana tablet pavanenge vachifamba ...
90 Mudzidzi Verenga Bhuku paTram 28 / 12 / 2014 90 Vadzidzi verenga mabhuku Wezvitima Zviduku Anova: Anatolian Youth Association (AGD) Antalya Branch kuti 'Wose uye spaceless kuverenga' basa akafukidza 90 mudzidzi pamberi rinomira, chitima uye kudzidza mumabhuku. 90 vadzidzi kudzidza zvakasiyana zvikoro zvose pamusoro Turkey mukati kutsanangurwa mabasa kunze panguva, mabhuku kuverenga chitima uye zvemabhazi. Vadzidzi vanofamba pachitima ne mabhuku, vagari vemo vakawana chido chikuru. Kuti kuwedzera kuverenga mabhuku kuziva 'Wose uye spaceless kuverenga' zvichiratidza kuti sangano chiitiko inonzi AGD Antalya Branch President Ahmet Cooking, "chikoro yedu uye tine boka kuverenga kuti kusekondari. Nhasi, verenga vedu vaduku vanhu vakaenda pachivara. Mabhuku Both ...
Akadzidza Chikoro Chechikoro Muna Samsun 19 / 01 / 2015 Verenga bhuku pamutambo wechikoro muSamsun: Kuti kuve nekuwanda kwemabhuku neAvavaikik Anatolian Multi-Program High School, bhuku rekuverenga bhuku rakaitwa pa tram mukati mekushandiswa kweLis kuverenga isina Lis project. Vadzidzi ve30 vanobva kuAyvacik Anatolian Multi-Program High School verenga bhuku iri pa tram. Vadzidzisi vechikoro vane Mudzidzisi weChikoro cheAyvacık Anatolian Multi-Program High School vakapinda mutambo pamwe naAli YILDIZ. Vadzidzi nevadzidzisi vanotora kutarisirwa kwakakodzera kune nyaya yekuverenga panguva ye1 awa 10 kwemaawa masere pamba kufamba.
Verenga mabhuku pane trolley kuti utaure nezvekuverenga mabhuku 18 / 03 / 2015 Vanoverenga bhuku pane trolley kuti vatarise kuverenga kwemabhuku: Hakki Altop Anatolian High School muKayseri 11. Vadzidzi vakapedza kudzidza vakadzidziswa neChipatimendi cheChipatimendi cheNational Education. Munharaunda ye 'Kayseri Reading' Project yakarongedzwa neChipatimendi cheChipatimendi CheNational Education muKayseri, vadzidzi veHakkı Altop Anatolian High School vakasaina chimwe chiitiko. Vadzidzi kubva mukirasi ye11 vakaverenga bhuku mumutambo unopa hufambisi kuenda kuguta kuitira kuti tinyatsoverenga kuverenga mabhuku. Hakol Altop Anatolian High School Mutevedzeri Erol Gözingi, uyo akapa ruzivo pamusoro pebasa iro vadzidzi ve30 vakapinda, vakati, katıl Kayseri iri kuverenga X Project yakaitwa neDirectory ye National Education Yaklaşık
Bhuku rakaparidzirwa kune vagari vemuTrams yeChitsuwa cheKayseri Fair 13 / 10 / 2017 14 inovakwa neKayseri Metropolitan Municipality pakati pe22-1 October. Bhuku racho rakaparidzirwa kune vagari vemuTrams yeChirongwa cheKaiseri Book. Meya Mustafa Çelik akatorawo tram uye akakokera vagari kuBhuku reChinyorwa. Meya Çelik akakumbira rubatsiro rwe "Kudzidza Guta Başkan. Pamberi peBhuku Rakanaka, iro richagadzirirwa neMetropolitan Municipality muKayseri World Trade Center, matamende akaiswa. Panguva yeusiku, motokari dzose dzakange dzakagadzirirwa mabhuku uye mabhuku. Kubvira kumaawa ekutanga emazuva, vatasvi vakukwazisa vafambi pamatanda. Vatakuri vakaenda kuzvikoro kana nzvimbo dzebasa kuti vaverenge mabhuku akaparadzirwa. Book Fair panguva yezuva Gün
Vadzidzi Verengai Mabhuku muIZBAN
90 Mudzidzi Verenga Bhuku paTram
Akadzidza Chikoro Chechikoro Muna Samsun
Verenga mabhuku pane trolley kuti utaure nezvekuverenga mabhuku
Bhuku rakaparidzirwa kune vagari vemuTrams yeChitsuwa cheKayseri Fair
Samsun OMÜ anopa mabhuku pamutambo
Bhuku reBhuku muTram
Bhuku rinochengeta mutambo
Vanoverenga bhuku pane chinyorwa che nostalgic
Bhuku raSamusun Gavhuna Rekuita Mabasa
Nhau Archive Sarudza mwedzi October 2019 (220) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (634) June 2019 (504) May 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Range 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Range 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Range 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Range 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Range 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Range 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Range 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Range 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Range 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Range 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Range 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Range 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Range 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) October 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Range 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)